သူမ | Moe Nay
Archive for the ‘သူမ’ Category
ွှTo my ideal person လေးသို့ …
သူမ…(My Ideal Person)
တစ်ချိန်က စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အရာတစ်ခုကို ဖြစ်မြောက်အောင် လုပ်ဆောင်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ထားတဲ့ အရာက အခု ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်မြောက်ခွင့်ပေးတဲ့ သူမ ကိုလည်း အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူမကြောင့် မက်ချင်တဲ့အိပ်မက်တစ်ချို့ကိုလည်း ရဲရဲရင့်ရင့် မက်ဖို့ ခွန်အားတွေ ရခဲ့တယ်။ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ မရှိဘူးလို့ လက်ခံလိုက်တယ်။ ပြင်းပြတဲ့ စိတ်ဆန္ဒနဲ့ ဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကို ရှာဖွေနိုင်ရင် တကယ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကို အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် သတ္တိတော့ ရှိဖို့ လိုအပ်တယ်လေ။
အရင်တုန်းက ၀ိုးတ၀ိုး မသဲမကွဲချခဲ့တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရဲရင့်ပြတ်သားစွာနဲ့ ချလိုက်နိုင်ပြီ။ အဲဒီ လမ်းကြောင်းအတိုင်း လျှောက်ပြီး ပန်းတိုင်ကို ရောက်အောင်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ။ အဲဒီလို ဆုံးဖြတ်လိုက်လို့လားတော့ မသိပါဘူး လမ်းစကတော့ တစွန်းတစ မြင်လာရတယ်။ အခက်အခဲ ကတော့ မလွဲမသွေတွေ့မှာပဲလေ။ ဒါပေမယ့် စိတ်မပျက်ပါဘူး။
အရင်တုန်းက သူမနဲ့ စကားပြောဖို့ဆိုတာ အိပ်မက်ထဲမှာတောင် ထည့်မက်ရဲတဲ့အရာတစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ City FM ကနေ သူမရဲ့ အသံကို အမှတ်မထင် ကြားခဲ့ရတုန်းက သူမနဲ့ စကားပြောချင်တယ်လို့ စိတ်ကူးလေး ပေါ်ခဲ့တယ် (မရေမရာနဲ့ပါ)။ အခုတော့ သူမနဲ့အတူတူ ကော်ဖီသောက်ခွင့်ရပြီး စကားတွေ ပြောခွင့်ရခဲ့တယ်။ အဲဒီကော်ဖီတစ်ခွက်ဟာ ဘ၀မှာ အနှစ်သာရအရှိဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံး ပါပဲ။ သူမဆီကနေ ငါ သူမလို တော်အောင် ကြိုးစားရဦးမယ်ဆိုတဲ့ အရာတစ်ခုကိုလည်း ပီပီပြင်ပြင်ရလိုက်တယ်။ သူမလို ထူးချွန်တဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်တယ်လေ။ အဲဒီလို စိတ်မျိုးဖြစ်အောင် ထည့်ပေးနိုင်တဲ့ သူမကိုလည်း အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်။ သူမက ကော်ဖီတိုက်ရုံတင်မကဘူး စာအုပ်တွေကိုလည်း အမှတ်တရ လက်မှတ်ရေးထိုးပေးလိုက်သေးတယ်။ ဒီနေ့(၁၇-၁၂-၀၈)ရက်နေ့ကတော့… ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြက္ခဒိန်လေးထဲက ရက်ထူးရက်မြတ်လေး တစ်ရက်ပေါ့။ ရုပ်ရည်ကလည်း လှပ၊ စကားပြောလည်းကောင်း၊ တော်လည်းတော်၊ ထက်လည်း ထက်မြက်တဲ့ သူမနဲ့ စကားပြောရတဲ့အချိန်မှာ သူမကို ပြောမယ်လို့ စုဆောင်းထားတဲ့ စကားလုံးတွေ ပျောက်ဆုံးသွားတယ်။ သူမနဲ့ လမ်းခွဲပြီး ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ ခြေထောက်နဲ့ မြေကြီး မထိဘူးလို့တောင် ထင်ရတယ်… မြောက်ကြွ မြောက်ကြွနဲ့ ပြန်လာခဲ့တာ။ မှတ်တိုင်တောင် ကျော်သွားတယ်။
သူမရေ.. သူမကို တကယ်ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်.. အားလည်းကျတယ်…. သူမလိုလည်း ထူးချွန်ချင်တယ်….
(သူမ (My Ideal Person) ဆရာမ မနော်ဟရီ ကို ရည်ညွှန်းပါသည်။)
Posted in သူမ | 1 Comment »
You are currently browsing the archives for the သူမ category.